7 सरल तरिका: आफ्नो भान्सा महंगा हेर्नेछौं
तपाईं खाना पकाउनु प्रेम वा लिन-टाढा खाना रुचि कि, तपाईं निश्चित आफ्नो भान्सा महान बनाउन चाहनुहुन्छ हुनेछ। तर विकल्प रूपमा व्यापक रूपमा धेरै विकल्पहरू छ। कसरी एक लक्जरी भान्सा सिर्जना गर्न? वास्तवमा, तपाईं सजावट, प्रकाश र फर्नीचर लागि सही सामाग्री चयन भने, तपाईं आफ्नो घर फैशनेबल नजर प्रदान गर्न सक्षम हुनेछ। सबै बजेट फिट सुझाव र विभिन्न परिस्थितिहरु लागि: र तपाईं पूर्ण कोठा पुनर्निमाण गर्नु योजना भने, र तपाईँले सानातिना परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने।
आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथी - कुनै पनि ठाउँ बनाउन जब तपाईं ज्योति भनेर सम्झनुपर्छ। को ब्याकलाइटद्वारा एक दोहरी भूमिका छ: तपाईं एक गाढा कुना उजाला र स्पेस थप स्टाइलिश बनाउन सक्छ रूपमा। तपाईंको भान्सा साँच्चै स्टाइलिश हेर्न परम्परागत दीपक आफैलाई सीमित छैन। द्वीप भन्दा expressive छत दीपक केन्द्र र विलासी लटकन रोशनी चयन गर्नुहोस्।
यसको विभिन्न भागहरु पूरक गर्न - भान्सा अधिक महंगा मा हेर्न बनाउन सबै भन्दा राम्रो तरिका हो। यस मामला मा, तपाईं डिजाइन दर्ता चयन लागि क्रममा लकर किन्न छैन। तपाईं बस, विभिन्न शैलीहरू मा अधिक महंगा कलम चयन गर्न सक्नुहुन्छ एउटा रंग र सबै मधुर स्वर देख्यो कि एक बनावट तिनीहरूलाई बस टिप्न।
यो राम्रो उच्च
ठूलो पर्खाल मंत्रिमंडलों को लाभ अनन्त छन्। तिनीहरूले, भण्डारण लागि थप स्थान प्रदान यसरी, अधिक ठाउँ खाली बनाउन साथै, पर्खाल को माथि आँखा आकर्षित, यस्तो अलमारियाँ अधिक शानदार हेर्न। एक विशेष सुरुचिपूर्ण नजर लागि छत गर्न मंत्रिमंडलों पर्खनुहोस्। तपाईं एक धेरै उच्च छत छ भने, तपाईं moldings को शीर्ष मा छडी वा गलत लकर बनाउन सक्छ।
एक गुणस्तर तल्ला लगानी
थप कोठा डिजाइन को कुनै पनि अन्य भाग भन्दा, परिसर को उपस्थिति तल्ला प्रभावित। आफ्नो फर्श सस्तो देखिएका भने, फर्नीचर, पनि, विलासी हेर्न छैन। तर, यो तपाईं तल्ला डिजाइन को सबैभन्दा महंगा संस्करण चयन गर्न आवश्यक मतलब छैन। बस एक किफायती मूल्य मा तपाईं को लागि सबै भन्दा आकर्षक विकल्प खोज्न। उदाहरणका लागि, तपाईं ग्रेनाइट वा काठ को नकल एक चीनी माटो टाइल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
एक डुब्नु र उच्च गुणस्तर नल किन्न
हरेक दिन हामी डुब्नु र नल, प्रति दिन पटकको कहिलेकाहीं दर्जनौं प्रयोग गर्नुहोस्। तर, जब भान्सा नवीकरण, यो साइटमा, धेरै ध्यान छैन। यो एक उच्च गुणस्तरीय खोल किन्न लायक छ: यो अब को लागि राम्रो हेर्न हुनेछ। तपाईं किन्न सक्छन् कि सबै भन्दा राम्रो किन्न। सस्तो डुब्नु स्थलहरू ढाकिएको र आफ्नो भान्सा को समग्र प्रभाव बिगार्छ गर्न सकिन्छ। साथै, उच्च गुणस्तरीय नल तपाईं आकर्षण र फैशनेबल भान्सा थप्न मद्दत गर्नेछ।
के तपाईं "एप्रन" कुरा छैन लाग्छ? तपाईं गलत छन्। यो अक्सर विशुद्ध सजावटी मानिन्छ, तर यो पनि कार्यात्मक महत्त्व छ। यो पर्खाल सुरक्षा र चाँडै आदेश बहाल गर्न मद्दत गर्छ। साथै, स्टाइलिश "एप्रन" भान्सा दिन्छ अभिव्यक्ति - सबै पछि, यो पर्खाल को एक प्रभावशाली खण्ड लाग्छ। तपाईं एक सादा सेतो टाइल चयन भने पनि, यसको गुणस्तर ध्यान पक्का हुन!
फर्नीचर व्यवस्था विचार
फर्नीचर को व्यवस्था मात्र महत्त्वपूर्ण तपाईं आराम महसुस सुनिश्चित गर्न, तर पनि ठाउँ शानदार देख्यो सुनिश्चित छ। को त्रिकोण नियम पूरा! यो नियम, चुलो, फ्रिज र डुब्नु भान्सा को प्रयोग गर्न त्रिकोण को कुना मा राखिएको हुनुपर्छ अनुसार सबैभन्दा सुविधाजनक थियो। राम्रो-व्यवस्थित ठाउँ विचारशील र महंगा देखिन्छ। बोनस टिप: यो सबैभन्दा सुविधाजनक विकल्प छ रूपमा, भान्सा गर्न प्रवेश नजिकै फ्रिज राख्न।
पारदर्शी बरफ कसरी प्राप्त गर्ने? घर-पारदर्शी बरफ कसरी बनाउने?
के हानिकारक अशुद्धताओं पानी फिल्टर हटाउनुहोस्
काट ब्लक - सफाई को लागि एक अपरिहार्य उपकरण
क्राकरी Fontignac: ग्राहक समीक्षा
एक नवजात बच्चा केटा धुन कसरी टाढा गर्न? केटा धुन कति गर्न टाढा
विशेष गरी पकाउने, उत्कृष्ट व्यञ्जनहरु र सिफारिसहरू: के रोटी बनाउँछ
सम्झौता - यो के हो? यो अवधारणा बारे एक सानो बिट
Homeowners 'संगतले लागि उत्पादन 1 C।
मित्रता मेष र मेष। उपयुक्त राशिफल लक्षण
लाग्यो को पाठो: कसरी सुन्दर स्मारिका बनाउन
"Megafon": अक्षम "प्रतिज्ञा गरिएको भुक्तानी" (सबै विधिहरू) अक्षम गर्नुहोस्
"Maynkraft" बनाउन हतियार जस्तै, हतियार को प्रकार के हो, र तिनीहरूलाई कस्तो भिन्नता छ
हार्ड रक होटल पटाया: संगीत प्रेमीहरूलाई लागि स्वर्ग
युवा rosiyskogo गायक misha Puntov: आफ्नो जीवनी र क्यारियर